आँचल को विवाहमा पल शाह नजानुको कारण यस्तो रहेछ
March 14, 2020 1608
विहिवार आँचल शर्माले आफ्नो एक वर्ष देखिको प्रेमलाई विवा’हमा प’रिणत गरेकी छन् । उनले प्रेमी उदिप श्रेष्ठसंग ल’गनगाँठो क’सेकी हुन् । आँचल’को वि’वाह अघि उनको पल शाहसंग नजिक’को स’म्बन्ध थियो । दुवै जनाले एक अर्कालाई मिल्ने साथी बता’उँदै आए’का थिए ।
तर आँचलको विवा’हमा सबै क’लाकार पुग्दा पल भने पुगेनन् । पललाई आँचलको विवा’हमा नदेखेपछि विभिन्न अड्कल गरिएको छ ।पल शाह ललितपुरको गोदा’वरीमा एउटा म्युजिक भिडि’योको सुटिगंमा ब्यस्त रहेका थिए ।
उनले त्यो कुरा सामाजिक सञ्जा’ल मार्फत जान’कारी गराएका छन् । उनले फेसवुकमा लाइभ आउँदै आफु दिनभर ब्यस्त भएको बताएका थिए । उनलाई फेसवुक लाइभमा आउँदा आँचल’को विवाह’मा किन नजा’नुभएको हो ? तपाईलाई आँचल’ले निम्ता कार्ड पठाएकी थिइनन् ? भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसको जवाफ दिँदै पलले आफु दिनभर ब्य’स्त भएका कारण आफु जान नपाएको बताएका छन् । उनले आँचलले आफ्नो विवाह’को निम्ता का’र्ड भने पठाएको पनि बताएका थिए ।तर आँ’चल शर्मा र पल शाहले एक अर्कालाई इन्स्टाग्राममा अ’न्फालो गरेको खुलेको छ ।
पल शाह र आँचल शर्माले संगै नाइँ न भन्नु ल ४ बाट डेब्यु गरेका थिए । यस चलचित्रको स:फलता संगै यी दुईले धेरै म्युजिक भि’डियोमा संगै काम समेत ग’रेका थिए । काम संगै यी दुई मिल्ने साथी समे’त बनेका थिए । तर अहिले आँचल शर्माको वि’वाह भएसंगै यी दुईले केहि समय अघि एक अर्कालाई इन्स्टाग्रामबाट अ’न्फलो गरेको पा’इएको छ ।
यी दुईको फ्यानहरुले सामाजिक संजालमा यहि कुरालाई लिएर प्रश्न उ’ठाईरहेका छन् । आँचल शर्माले पल शाह’लाई विवाह’को निम्तो कार्ड पठाएकी छिन् । आँचल शर्मा प्रेमी उदिप श्रेष्ठ संग विवाह ब’न्धनमा बाँ’धिएकी छिन् ।
‘नाइँ नभन्नू ४’ बाट डेब्यु गर्दै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा स’क्रिय बनेकी आँचल पछिल्लो समय उदिप श्रेष्ठसँग प्रेममा थिइन् । विहिवार राजधानी’मा यो दुई जोडीको भव्य स’मारोहको आ’योजना गरी बिहे भएको हो ।विहिवार पारि’वारिक माहोल बीच आंच’लको विवाह स’म्पन्न भएको छ ।
बुढानि’लकण्ठ स्थित पार्क भिलेजमा विवा’ह स’म्पन्न भएको हो । आँचल शर्माले चल’चित्र छेत्रका नि’कट साथीलाई मात्र विवाह’मा नि’म्त्याएकी छिन् भने मिडि’यालाई भि’डियो फोटो लिन अ’नुमति दि’एकी छैनन् ।आँचल शर्माका श्रीमान् पेसा’ले मे’डिकल डाक्टर हुन् ।
Prevभेडे खु’र्सानी भित्र भेटियो यस्तो चिज, तरकारी का’ट्दा उड्यो हो’श ! हेर्नुहोस्
Nextतनहुँमा घ’ट्यो डर`लाग्दो घ`टना, आफ्नै ३ बर्षीय छोरीलाइ झुण्डा`ए बाबाले, आमा भागेर बा`च्न सफल [भिडियो सहित]
यातायात व्यवसायीबीच एकाएक कु’टाकु’ट (भिडियो सहित)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (85626)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (81114)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (75408)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (72917)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (67555)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (66959)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (66953)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (66597)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (63601)
निशाले पहिला यस्तो दमदार अभिनय र डान्स गर्थिन् (भिडियो सहित) (60727)
टीका सानुको सबैलाई रुवाउने तिजको गित बन्यो भाइरल (हे`र्नुस् भिडियो )
आज पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? यस्ताे छ आजको डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ